उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही १ लाख
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको आयोजनामा यसै महिना हुने उत्कृष्ट खेलाडी सम्मान कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट घोषित हुने एक महिला र एक पुरुष खेलाडीले जनही १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिइने भएको छ । मंगलबजार स्थित ललितपुर महानगरपालिकाको संग्रहालयमा हुने कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट हुने पुरुष र महिला खेलाडीलाई जनता बैंकले नगद पुरस्कार उपलब्ध गराउने छ । […]
सोमवार, पुस ९, २०७५
सन्दीपको प्रदर्शन कस्तो रहला ?
काठमाडौं । नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अहलि अस्ट्रेलियाको बिग बास लिग खेलिरहेका छन् । पहिलो खेलमा दुई विकेट लिएर शानदार सुरुवात गरेका सन्दीप सोमबार आफ्नो दोस्रो खेलमा मैदानमा उत्रिंदैछन् । बिग बास लिग अन्तर्गत सोमबार सन्दीप सामेल मेलबर्न स्टार्स होबर्ट हुरिकेनसँग खेल्दैछ । पहिलो खेलमा हार ब्यहोरेको मेलबर्न तालिकाको पुछारमा छ । होबर्टमा […]
क्लब विश्वकपको उपाधि रियल मड्रिडलाई
काठमाडौं । फिफा क्लब विश्वकपको उपाधि स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले जितेको छ । युएईको आबु धावीमा भएको खेलमा घरेलु टिम अल ऐनलाई ४–१ ले हराउँदै रियल लगातार तेस्रो पटक च्याम्पियन बन्न सफल भयो । समग्रमा रियलको यो चौथो क्लब विश्वकप उपाधि हो । १४औं मिनेटमा लुका मोड्रिचले गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो […]
आइतवार, पुस ८, २०७५
मनाङलाई ५ अंकको अग्रता बनाउने अवसर
काठमाडौं । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज दशौं चरणको खेल सकिँदै छ । जस अन्तर्गत आज २ वटा खेल हुँदैछन् । आजका दुवै खेल एन्फा मैदान ललितपुरमा हुने छ । आज विहान ११ बजे हुने पहिलो खेलमा दुई विभागीय क्लब एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी आमने सामने हुने छन् । जारी प्रतियोगितामा आर्मी १८ […]
इपीएलको उपाधि ललितपुरले जित्यो
काठमाडौँ । एभरेष्ट प्रिमियर लिग ईपीएलको उपाधि ललितपुर प्याट्रियट्सले जितेको छ । शनिबार त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा भैरहवा ग्ल्यालिडएटर्सलाई १४ रनले हराउँदै ललितपुरले उपाधि जितेको हो । अघिल्लो संस्करणमा भैरहवा विराटनगर वारियर्ससँग १ रनले पराजित भएको शरद भेषावकरको कप्तानीमा रहेको भैरहवा लगातार दोस्रो संस्करणमा फाइनलमा पुगेर उपाधि होडबाट बाहिरिएको हो । १५६ रनको लक्ष्य पछ्याएको भैरहवाले […]
बिग ब्यासमा आज सन्दीप प्रदर्शन कस्तो रहला ?
काठमाडौं – आज नेपाली चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको टिम मेलबर्न स्टार्सले ‘बिग बास लिग’ क्रिकेटमा पहिलो खेल खेल्दैछ । आज दिउँसो २ बजे सुरु हुने उक्त खेलमा के आफ्नो टीमलाई जिताउन सन्दीपले मौका पाउछन् त रु आज हुने उक्त रोमान्चक खेलमा सन्दीपले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नेछन् ।आफ्नो टिमको पहिलो खेलमा नै सन्दीपले डेब्यु गर्ने सम्भावना […]
शुक्रबार, पुस ६, २०७५
एडिभिजन लिगः थ्रीस्टारको उपाधि यात्रामा धक्का
काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा नबौं खेलमा थ्रीस्टार क्लवले त्रिभुवन आर्मीसँग बराबरी खेलपछि उपाधि यात्रामा ठूलो धक्का लागेको छ । सातदोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा थ्रीस्टार आर्मीसँग एक एक गोलको बराबरीमा रोकियो । त्यसो त थ्रीस्टारले एक गोलको अग्रता जोगाउन सकेन । खेलको ११ औं मिनेटमा थ्रीस्टारका रञ्जन विष्टको प्रहार […]
बिहिबार, पुस ५, २०७५
फाइनल प्रवेशका लागि काठमाडौं र भैरहवाबीच भिडन्त
काठमाडौं । भैरहवा ग्लाडियटर्स एभरेष्ट प्रिमियर लिगको क्वालिफायर्समा पुगेको छ । मंगलबार भएको खेलमा भैरहवाले चितवन टाइगर्सले भैरहवा ४ विकेटले हराउँदै क्वालिफायर्समा स्थान बनानउ सफल भएको हो । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको चितवनले २० ओभरमा आठ विकेट गुमाउदै १ सय ३९ रन बनायो । राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको चितवनले १८ रनमा […]
पुरुष लिग भलिबलमा आज पाँच टोली भिड्दै
पोखरा । पोखरमा हिजोबाट शुरु भएको चौथो संस्करणको आरबीबी–एनभिए राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल प्रतियोगितामा अन्तर्गत आठवटा क्लब सहभागी प्रतियोगितामा आज लिग चरणका पाँच खेल हुनेछन । यस अघि हिजो भएको खेलमा विभागीय टोली एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन् । पुरुष लिग भलिबल प्रतियोगितामा साविकको डिफेन्डिङ च्याम्पियन आर्मीले जावलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई […]
सोमवार, पुस २, २०७५
एनआरटी र फ्रेण्डस् बढी दबाबमा
ए डिभिजन लिगः आज तीन खेलका ६ टोली मैदानमा काठमाडौं– काठमाडौंमा जारी सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजबाट नवौं चरणका खेल शुरु हुँदैछन् । आज तीन खेलका ६ टोली मैदानमा उत्रिनेछन् । पहिलो खेलमा न्युरोड टिम (एनआरटी)ले हिमालयन शेर्पा क्लबको सामना गर्दैछ । नवौं खेलसम्म आइपुग्दा १ अंकमात्र जोडेको एनआरटीलाई नवौं खेलमा पनि जित […]
नेप्सेलाई अर्थमन्त्रालयको स्पष्टीकरण
खिर खाएर साउन १५ मनाइँदै
उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न माग
थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय खुला गर्न सीसीएमसीमा छलफल
नेपालमा थप ३ हजार ३६५ जनामा कोरोना संक्रण, १६ जनाको मृत्यु
दुई हजार जरिवाना र २८ दिन कैद तोकिएका फरार प्रतिवादी पक्राउ
सडक दुर्घटनामा भारतका राष्ट्रिय सुटिङ खेलाडी नमन पाली वालको मृत्यु
नागढुंगाबाट लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
सुन पसल लुट्ने प्रयासमा संलग्न ६ जना पक्राउ
अमेरिकाको अलास्कामा शक्तिशाली भूकम्प
कपाल झर्ने समस्या छ ? यी उपाय अपनाउनुस्
लमजुङमा एचआइभी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै
७७९ संक्रमितको आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार गरिदै
भारतमा थप ४३ हजार जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण
मन्त्री बन्न हानथाप, दौडमा १५६ जना
जोन्सनको खोप लगाएपछि धादिङमा एक जना वृद्धको मृत्यु, अनुसन्धान गर्न टोली घटनास्थल
‘ओलीको अध्यक्ष खानेलाई मेरो शुभकामना छ, मचाहिँ जान्नँ’